प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरे पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रशंसा ? – Pahilo Page
प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरे पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रशंसा ?
९ चैत्र २०७५, शनिबार २१:१५ 1933 पटक हेरिएको
कठमाडौं, ९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रशंसा गरेका छन् । “व्यस्त दैनिकीबाट समय निकालेर झलनाथजीले यति राम्रो सिर्जना गर्नुभएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “उहाँको सिर्जनशीलता धेरैजनाको लागि यो प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ ।”
गीतकार एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गीतिएल्बम ‘‘परिवर्तनका स्वरहरु भाग २’’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल तीव्र परिवर्तनको क्रममा रहेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा संघीय गणतन्त्र आउनु, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु, जनताले अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु र विकास निर्माणको तीव्रताले देशमा परिवर्तनको क्रम बढेको बताए । “हाम्रो देशमा सकारात्मक परिवर्तनको क्रम बढेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “विकास र समृद्धिको अभियान सञ्चालन भएसँगै यो परिवर्तनले नेपालीको मुहारमा पनि उज्यालो ल्याउनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अमूर्त समृद्धि र औषत सुखमा विश्वास नगर्ने बताए । “हामी औषतमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो, औषतमा साक्षरता बढ्यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हरेक व्यक्तिले महसुस गर्ने गरीको समृद्धि र सुख जनतालाई दिलाउन चाहन्छौं । सरकार सामाजिक न्याय सहितको समानताको पक्षमा छ ।”